गोविन्द केसीका मागबारे छलफल गर्न सरकार तयार – ToplineKhabar
जुम्ला – १४ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा गोविन्द केसीका मागबारे छलफल गर्न सरकार तयार देखिएको छ । जुम्लामा अनशनरत केसीको स्वास्थ्य थप कमजोर बन्दै गएपछि सरकार गम्भीर बनेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।
केसीको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकारी पक्षबाट वार्ताको वातावरण बनाउन शुक्रबार दिनभरजसो प्रयास भएको केसीका सहयोगीहरूले बताए । सरकारी पक्षले गरेको प्रयासबारे डा केसीलाई पनि जानकारी गराइएको छ । सरकार वार्ताका लागि अग्रसर देखिएको केसीपक्षीय डा. अभिषेक सिंहले बताए ।
सरकारले माग पूरा गर्ने वातावरण तयार गरे डा गोविन्द केसी जुम्लाबाट काठमाडौं आउन तयार देखिएका छन् । तर, काठमाडौं ल्याइसकेपछि झुलाउन सक्ने चिन्ता केसी पक्षलाई छ । सरकार अझै वार्ताका लागि गम्भीर नभएको बुझाइ डा केसीको छ ।
← लागूऔषध भयावह बन्दै
ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न १० स्थानको ट्राफिक बत्ती मर्मत गरिदै →
ठमेलमा अमेरिकी नागरिकको मृत्यु
August 8, 2017 प्रदीप भट्ट 0
किन तात्छ स्वयम्भुको ढुंगो ? कारण बुझ्नेहरूको घुइँचो
October 17, 2017 प्रदीप भट्ट 0